မြေပြန့်လွင်ပြင်မှမြင်ကွင်းများ…………….အမြန်လမ်းမကြီး | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Local Guides » မြေပြန့်လွင်ပြင်မှမြင်ကွင်းများ…………….အမြန်လမ်းမကြီး	20
Posted by ko pauk mandalay on Jul 21, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 20 comments
3 လမ်းဘေးက နွားအုပ် သိုးအုပ်
6 လမ်းခင်းနေတဲ့လုပ်သားတွေပါ7 စိမ်းစိုလန်းဆန်းသော8 ပြာလွင်စိမ်းစိုသော……………………………………9 တိမ်ဖြူပြာ ထန်းပင်ညို အလွမ်းပို10 ထန်းပင်တန်းက မတ်မတ်ရပ်လို့ကင်းစောင့်နေသလိုပါ11 ထန်းတောစိမ်းစိမ်း 12တိမ်ကို ပန်းချီဆွဲထားတာဘယ်သူလဲမသိ 13 စိုစိုစိမ်းစိမ်း…………..14 လွင့်မျောတိမ်……………………..
16 အလှပြ………………………….17 ဒီလမ်းဒီစခန်းကတော့ ထန်းပင်တွေဘဲများတယ်18 အပြန်လမ်းဆုံ………………………………………….
ko pauk mandalay has written 1109 post in this blog.
မောင်ပေ says: no8 ကို ကြိုက်တယ်ဗျို့
water-melon says: တားတားအတွက် စပျစ်သီးပါလား
ဘဲဥ says: ဟဲ့ဟဲ့ အဲ့ဒိ စပျစ်သီး၊ ဇဗျွတ်သီး ၊ သဗျက်သီး အဲ့လိုခေါ်နေတာတွေကလည်း အတူတူပဲထင်တယ်ဟဲ့ တစ်ခိုင်ထဲမှာ အပြွတ်လိုက် သီးနေဒါတွေလေ အဟီးးးးးးးးးး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8248
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အိမ်လာခဲ့ မိတ္ထီလာသူပုံတွေပြမယ်
mamanoyar says: ဘယ်ပန်းချီ ရေးလို့မမှီ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမှီခဲ့ပြီ……….
ဇောက် ထိုး says: ၀င်ရောက်…ကြည့်ရှု…ခံစား…. ကြိုက်တာများကိုလဲ….ယူသိမ်းသွားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ….
သန်းထွဋ်ဦး says: ကြည့်မဆုံးတဲ့ထန်းတောတွေနဲ့ ၊တောင်ကြီးသွားတုန်းရောက်တဲ့ ပျော်ဘွယ်မြို့ က နာရီစင်လေး
ပြန်တွေ့ ရ၏။ကျေးဇူး လေးပေါက်။
ညလေး says: ကောင်းကင်ပြာအောက်ကထန်းတောလေးတွေ………
snow white says: ဓာတ်ပုံအကြောင်းလည်းနားလည်ဘူးနော် နံပတ် 3ပုံကစတိုင်လားဝါးနေတာကလေ ဘယ်လိုမျိုးလည်းလေးလေးပေါက် တကယ်မသိလို့မေးတာနော်။။။ကျန်ပုံတွေက အကုန်ကြိုက်တယ် ။။။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စနိုးလေးရေ စာအုပ်ကလေးအတွက်ကျေးကျေးပါခင်ဗျာ။
အခုပုံလေးတွေက အမြန်ပြေးနေတဲ့ ကားပေါ်ကရိုက်ထားလို့ဝါးတာပါခင်ဗျာ
ဒါပေမယ့် ခရီးသွားမှတ်တမ်းဖြစ်လို့ သတိတရ တင်ပေးတာပါ။
ပင်လယ် ပျော် says: လေးလေးပေါက် ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအားပေးသွားပါတယ် ……. မန်းလေးမြို့ရောက်လာတာ ကူညီခဲ့လို့လည်း ကျေးဇူးပါခင်ဗျား ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပင်လယ်ပျော်လေးရေ
တွေတုန်းလေး နိုင်သလောက်ကူညီရတာ အပန်းမကြီးပါခင်ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2589
အလင်းဆက် says: ကျွန်တော်..လည်း..ခရီးတစ်ခု အတူတူ ထွက်လိုက်ရသလို..ပါပဲ..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4624
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: နာရီစင်ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း
ငယ်ငယ်က နားထောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းကို အမှတ်ရသွားတယ် ..
နာရီစင်ကြီး သီချင်းညည်းဆို .. ဆိုလားပဲ ..
ဒါနဲ့ ဖေဂျီးကို ချင်းချင်းမို့ လက်တို့ ပြောရဦးမယ် ..
ဟိုလေ .. တိမ်ကို ပန်းချီဆွဲတာ အနော်ဂျ .. အဟီးးးး :D
MaMa says: ပုံတွေ ဒီလောက်များများ ရိုက်နိုင်တာ ဘယ်လိုများ သိမ်းပါလိမ့်လို့တောင် စဉ်းစားမိတယ်။
ပုံတွေရောကုန်ပြီး ဘယ်မှာ ရိုက်မှန်း မသိ မဖြစ်ဘူးလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 120
metallic says: လှပသောကမ္ဘာကြီးကို ကျနော်တို့တသက်မှာတော့ မြင်တွေ့နိုင်ပါဦးမည်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အလင်းဆက်ရေ……..နောက်ရက်မှာ စစ်ကိုင်းဘက်သွားမယ်လိုက်ခဲ့နော်။
မမရေ ပုံတွေကို နှစ်အလိုက်ဖ်ုလ်ဒါအရင်လုပ်ပါတယ်။
ဥပမာပေးရင် 2011အောက်မှာ လ……………..လအောက်မှာ ရက်စွဲ့မှတ်ထားတဲ့ဖိုင်။
ဘယ်ပုံလေးဆိုရင် ဘယ်နေ့လောက်ကရိုက်ခဲ့တာ ဘယ်သွားတုံးကဆိုပြန်စဉ်းစားရင်ပေါ်ပါ၏၊
metallic ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်သော်လည်း ပုံကလေးကြည့် မနောနဲ့ပြေးသွားလိုက်ပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 56
ဗိုက်ကြီး says: အပြာရောင်နောက်ခံနဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြိုက်မှကြိုက် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 255
thihayarzar says: လေးပေါက်ပုံတွေကတော့ အလန်းဇယားတွေချည်းပဲ တိမ်တွေရယ် ကောင်းကင်ပြာကြီးရယ် လယ်ကွင်းကြီးရယ် ထန်းပင်တွေရယ် တကယ်ကိုလွမ်းမော နှစ်သက်စရာကောင်းအောင် ရိုက်ထားတာ .. အားပေးသွားပါတယ် လေးပေါက်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျေးကျေး မင်းတို့ဆီလာရိုက်ချင်သေးတယ်
Comments By Postနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - စနေ - လုံမလေးမွန်မွန်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Mr. MarGa - အလင်း ဆက်လုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - နွေဦး - ဆူးFloral Gift - Macro Series - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအတု - Nyo Win - naywoon niစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - ဆူး - ko pauk mandalayဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - kyeemite - padonmarမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Nyo Win - kyeemiteသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - ဆူး - kyeemiteစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - Foreign Residentလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - Foreign Resident - Foreign Residentသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - naywoon niကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - padonmar - ခင်ခရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - padonmar - kaiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - kai - ဦးဦးပါလေရာခရီးသည်လေးသို့ - nway kyu - marblecommet“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - uncle gyi - padonmarစည်တော်ကြီး - ko pauk mandalay - ဦးဦးပါလေရာပုညကြိယာဆယ်ပါး - kyaw hteik - padonmarနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - uncle gyi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - padonmar - BMTM Mdyအဟံ ပထမံ - Ko chogyi - padonmarဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံး၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67478 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59493 Kyats )MaMa (58061 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...